Ny fiakaran-danjan’ny artemisia any Kamerona ao anatin’ny ady amin’ny COVID-19 · Global Voices teny Malagasy
'Tsy tokony handalina kokoa momba ny fanafody natoraly ve i Afrika?'
Voadika ny 13 Jona 2020 5:31 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Italiano, عربي, Español, Ελληνικά, polski, English
Efa ela ny zavamaniry artemisia no nampiasaina ho ravinkazo atao fanafody hanasitranana ny tazomoka sy ny aretina hafa any Kamerona sy manerana an'i Afrika. Pikantsary avy amin'ny lahatsary fanadihadiana “Orinasan'ny tazomoka: Ny fivarotam-panafody lehibe sy ny fanafody voajanahary” nataon'ny France24 tao amin'ny YouTube.
Nomen'ny tompon'andraikitry ny fahasalamam-bahoaka toky ireo olom-pirenena raha vao nahitana ny tranga COVID-19 voalohany tao Yaounde, renivohitr'i Kamerona tamin'ny 6 Martsa fa handray fepetra haingana ny governemanta mba hamehezana ny fihanaky ny viriosy, ao anatin'izany ny tsy maintsy hitondrana fiarotava eny ankalamanjana.
Saingy niparitaka haingana ilay viriosy ary nandravarava ny toekareny ihany koa.
Tamin'ny 17 Martsa, raha nanambara toromarika miisa 13 hamehezana ny fiparitahana ny Praiminisitra Joseph Dione Ngute dia olona miisa 10 no voatily fa nitondra ilay tsimokaretina. Tranga miisa 8.060 no voarakitra tao Kamerona hatramin'ny volana Martsa ka maherin'ny 200 no maty ary 4.700 mahery no efa sitrana hatramin'ny 8 Jona.
Noalefahan'i Ngute anefa ny fepetra isan-karazany iadiana amin'ny COVID-19 tamin'ny 30 Aprily, taorian'ny fivoriana nataon'ny komity iraisan'ny minisitera samihafa izay natao hamerenana amin'ny laoniny ny toekarena sy ny tsena ao an-toerana.
Raha mitohy ny fitombon'ny tranga coronavirus tany Kamerona dia maro tamin'ireo mino ny fanasitranan'ny ravinkazo ao an-toerana no nitodika tany amin'ny zavamaniry artemisia rehefa nikasa ny hanokatra indray ny toekaren'ny firenena ny governemanta. Mino ny fanasitranan'ny zavamaniry artemisia hitsaboana ny tazomoka sy aretina hafa ny ankamaroan'ny Kameroney.
Nilaza tamin'ny Global Voices i Conglad Ngwa, mpahay siansa momba ny zavamaniry sady mpikaroka momba ny holatra ao amin'ny Oniversiten'i Buea fa afaka mitsabo ny aretin'andoha sy ny aretin-kibo, ankoatra ny aretina maro hafa ny zavamaniry artemisia.
Tamin'ny 25 Aprily, nanambara tamin'ny fahitalavi-pirenena CRTV ny Arsevekan'ny Diosezin'i Douala Metropolitana, Samuel Kleda fa nanomana fitsaboana iadiana amin'ny COVID-19 tamin'ny alàlan'ny zavamaniry izy izay ahitana ny zavamaniry artemisia. Hoy ny Arseveka Kelda:
Nampifangaroiko fotsiny ireo fangaro ireo satria efa mahalala ireo zavamaniry ireo aho arakaraka ny soritr'aretina coronavirus, nomaniko ary nomeko ireo olona misy soritr'aretina izany ary nihatsara izy ireo.
30 taona ny traikefa nananan'i Kleda tamin'ny fikarohana ny zavamaniry manasitrana, nifantoka tamin'ny fitsaboana ny aretin'ny taovam-pisefoana amin'ny alàlan'ny zavamaniry.
Naka fotoana ela ny governemantan'i Kamerona vao naneho hevitra tamin'ny fitsaboana coronavirus nataon'ilay mpitondra fivavahana ka nampanotany tena ireo Kameroney. Mahagaga fa nanentana ny fampiasana ny fitsaboana vita an-toerana hamonoana ilay coronavirus mampatahotra tamin'ny 19 Mey ny filoha Paul Biya tamin'ny fanambarana nataony ho an'ny firenena tao amin'ny fahitalavitra .
Nanosika ny Kameroney hiantehitra bebe kokoa amin'ny fangaro ara-javamaniry tao an-toerana hitsaboana ny soritr'aretin'ny COVID-19 ny antson'ny filoham-pirenena. Nitombo ny fambolena artemesia – antsoina ihany koa hoe wormwood (kakankazo) na absinthe – tany Kamerona noho ny herin'ity zavamaniry ity.
Ahitana voasarimakirana maitso, voasarimakirana, mananasy, zavamaniry hitsaboana ny fanaviana ary ny zavamaniry artemisia, ampangotrahina ary sotroina toy ny dite ny fanafody fanao mahazatra.
Nomena ity dite ‘Artemesia’ ity aho hosotroiko mba ho fiarovana amin'ny tazomoka rehefa nankany Kamerona aho volana vitsy lasa izay.
Mahaliana ny mahafantatra fa mety hanome hery fiarovana hiadiana amin'ny tsimok'aretina CoronaVirus ihany koa izy, tokony hanaovana fandalinana bebe kokoa ny momba ity zavamaniry hiadiana amin'ny Covid-19 ity.
Nilaza tamin'ny Global Voices i Atoh Mercy Acca, mpitantana kaonty iray miasa ao Doula, Kamerona fa nandefasan'ny ray aman-dreniny zava-maniry nentim-paharazana efa voahomana mialoha izy izay hampangotrahiny ary hosotroiny taorian'ny nitarainany fa mampiseho soritr'aretina coronavirus ny fianakavian'ny mpampiasa azy:
Tsy nisalasala ny ray aman-dreniko nandefa ahy tavoahangy misy ny ravinkazo nentim-paharazana izay hampangotrahina ary sotroina vantany vao nampahafantariko izy ireo fa maty ny zanaky ny lehibeko noho ny filazana fa voan'ny COVID-19.
Nilaza tamin'ny Global Voices i Bekondo Nestorine, mpiasa ao amin'ny fanaovana pirinty gazety ao Limbe, Kamerona fa mampangotraka sy misotro ny zavamaniry artemisia izy sy ny mpiara-miasa aminy ao amin'ny biraon'izy ireo efa ho intelo isan'andro, anisan'izany ny sakamalaho mba hanamafisana ny fiarovana.
Fiverenana amin'ny fambolena zavamaniry artemisia
Nilaza tamin'ny Global Voices i Asaba Lynda, mpandala ny tontolo iainana mahafatrapo miasa miaraka amin'ny delegasiona any amin'ny faritra atsimo andrefana misahana ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra fa “noho ny coronavirus no nahatonga ireo olona maro niverina namboly zavamaniry – indrindra ireo izay heverin'izy ireo fa manampy amin'ny fitsaboana ilay viriosy.”
Naneho ny ahiahiny mikasika ny mety hisian'ny tsy fahampian'ny zavamaniry artemisia noho ny lazany ho raokandro ilaina ao an-trano i Set Ekwadi Songe, solontenam-paritra iray hafa.
Satria te hiaro ny tenany amin'ny COVID-19 ny olona, ​​maro ankehitriny ny mpitsabo raokandro, mpitsabo nentim-paharazana no mampiasa ny natiora mba hijerena ny karazan-javamaniry rehetra hanasitranana, ka mampihena ny fisian'ny karazan-javamaniry toy izany. Ho sarotra amintsika ny hahita zavamaniry tahaka ny artemisia satria mila izany ny tsirairay hanasitranana ny COVID-19.
Hoy i delege Songe nanampy, na izany aza, fa hoe faly izy satria misy ilay ravinkazo hamonjena ny mponina.
Manaja ny fitsaboana nolovaina
Tsy mahagaga ny firongatry ny artemisia ao Kamerona ho toy ny zavamaniry tadiavina fatratra satria efa nampiasa izany nandritra ny taonjato maro ny mpitsabo nentim-paharazana hanasitranana ny aretina marobe ao anatin'izany ny tazo.
Nisy ny fitomboana tamin'ny fambolena ny artemisia, na lehibe io na kely rehefa nankatoavin'ny tontolon'ny fanamboaram-panafody ny fahombiazan'ity zavamaniry ity amin'ny fanasitranana ny areti-mifindra. Azo heverina ho toy ny fifaninanana ho an'ny orinasam-panafody lehibe izay mikasa ny hifehy ny famokarana azy izany, araka ny filazan'i Irene Teis tao amin'ny bilaoginy ho an'ny Tontolon'ny Tazomoka. Tamin'ny herintaona, hoy izy nanoratra:
Miparitaka toy ny kirihitrala manerana an'i Kamerona ny fambolena Artemisia, eo ambanin'ny fanaraha-mason'ireo oniversite sy ireo fikambanana ao an-toerana izay misoroka ny fambolena tsy araka ny tokony ho izy, ny fikarakarana ary ny fampiasana ilay zavamaniry.
Nilaza i Teis fa voarahona ny ain'ireo mpitsabo nentim-paharazana ary noravan'ny polisy ny fambolena ny artemesia tao an-toerana:
Maro ny tranga nahitana famonoana olona na fikasana hamono olona vao haingana. Mahakivy azy ireo ihany koa izany satria nolavina ary nahilikiliky ny mpanjanaka ara-pitsaboana, izay manampahaizana Frantsay ny ankamaroany ny fikarohana ataon'izy ireo sy ny andrana ara-pitsaboana maro izay ataon'izy ireo.
Vao haingana ny zavamaniry artemisia no lohateny lehibe tamin'ny gazety rehefa nanambara ny filoham-pirenenan'i Madasikara Andry Rajoelina fa afaka manasitrana ny soritr'aretina vokatry ny virosy ny COVID organics, tambavy vita amin'ny zavamaniry vokarina ao an-toerana ahitana artemisia.
Nolavin'ny Firenena Mikambana misahana ny Fahasalamana (OMS) haingana ny fahombiazan'ity COVID organics ity, tamin'ny fanamafisana fa tsy misy fanafody manasitrana ny COVID-19, saingy maro ny mpitondra ny firenena Afrikana no nanaiky ilay vokatra, anisan'izany i Tanzania sy i Kômôro.
Nangataka mba hanaovana fikarohana bebe kokoa momba ny herin'ny zavamaniry nentim-paharazana hanasitranana ireo viriosy mifindra ilay mpisera Kathleen Ndongmo tao amin'ny Twitter.
Vita amin'ny artemesia ny fanafodin'ny COVID19 navoakan'i Madagasikara vao haingana.
Ankehitriny, moa ve i Afrika tsy tokony hanana filankevitry ny manam-pahaizana manokana mba handinika akaiky ny fanafody voajanahary izay nampiasaintsika nandritra ny taona maro?
Firy amintsika no “mahatoky” ny fampiasana ny veromanitra, dite hodi-mananasy, ny hazoampela, ny ravina paw paw?